मानवियताको गतिलो उदाहरण हो "पोर्चुगल" | Namuna Nepal
गृहपृष्ठ मानवियताको गतिलो उदाहरण हो “पोर्चुगल”
आप्रवासीकालागी सुनौलो भबिस्यको आधार बन्दै पोर्चुगल
म पनि सोच्थें पहिले पोर्चुगल युरोपको अलि कमजोर राष्ट्र हो कि भनेर । तर आजकल त्यस्तो लाग्दैन् । संसारका महाशक्ति भनिएका देशहरुमा आज स्वास्थ्य जाँच गर्न नै कठिन स्थिती आईरहेको छ । यो खबर सुनिरहँदा पोर्चुगलमा कार्ड नभएका र यहाँ बस्न चाहन्छु भनेर यहाँको अध्यागमन निकाय हेर्ने सेफमा निवेदन दिएकाहरुलाई आपतकालिन अवस्था भरी यहाँको नागरिक सरह नै सुबिधा दिने निर्णय गरी मानवियताको गतिलो उदाहरण पुनः पोर्चुगलले देखाएको छ ।
१.अब प्रश्न आउन सक्छ के हो त त्यो सुबिधा भनेको ?
यहाँको नागरिक सरह सुबिधा भनेको आपत्कालिन अवस्था देशमा लागु रहुन्जेलसम्म मात्र कार्ड नभएर कोही पनि आप्रवासीहरु बिरामी भएको अवस्थामा उनिहरुको उपचारमा कुनै कमी हुदैन् । अरु बेलामा यो सामान्य लाग्छ तर बिरामी भएर भोग्नेलाई यस्को महत्व अलि बढि नै थाहा हुन्छ ।) यसको उदाहरण मैले कति पटक साथीहरुलाई स्वास्थ्य समस्या परेका बेला एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दा कसैले कार्ड नम्बर कहाँ को हो केही नसोधी एम्बुलेन्स पठाई चेक जाँच गरी फर्कनु भएकाहरु भन्नु हुन्छ ।
हो नि समय अनुकुल रहुन्जेल हात खुट्टा रहुन्जेल त काम गर्नु नै पर्छ । सरकारले पनि काम गर्न र गराउन त्यस्तै मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।, त्यसैले त यति ट्याक्स तिर्नुपर्छ, कार्डको लागि यति महिनाको ‘पेस्लिप’ देखाउनुपर्छ, भर्खरै काम गर्दैछ भने कम्पनीको ‘डिक्लेरेसाओ’ चाहिन्छ भनेर नियम बनाएको हो । यो नियम कार्ड दिन नपरोस, आप्रवासीलाई गा¥हो परोस भनेर होइन् । यो त सबैले कम पाऊन, काम सानो ठुलो नभनी देश विकासमा सबैले योग्दान गरुन भनेर पनि सरकारले लचकता अपनाएको मान्न सकिन्छ । जुन सत्य पनि हो ।
अहिले विपद्सँगै यहाँको व्यपार व्यवासायमा ठूलो धक्का लागेको छ । यस्तो समयमा पनि सरकारले ‘लेअफ’ र ‘सोसियल बेनेफिट’ को लागि लिगल नभएका आप्रवासीलाई सामावेश गरेको देख्दा लाग्छ पोर्चुगल महान छ । जहाँ जुनसुकै भु–भागबाट आएका आप्रवासी होस् उनिहरुलाई खानाकै समस्या छ भने निरन्तर धेरै ठाउँमा निशुल्क खानाको ब्यबस्था पनि गरेको छ । अब म यहाँ ‘सोसियल’ सुविधा सम्बन्धि थोरै विषय जोड्छु ।
२.के हो ‘ले अफ’ र फून्दो ?
यदि कुनै व्यवसाय वा कम्पनीको कारोबारमा एक्कासी गिरावट आएमा जस्तै, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक संकटजस्ता विविध अकल्पनिय घटना भएको अवस्थामा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँछ । ६ महिनासम्म र अवस्था हेर्दै बढिमा एक बर्षसम्म पनि दिन सकिने एक किसिमको आर्थिक सुविधा हो यो । यसका लागि अहिलेको कोरोनाको प्रकोप पनि अन्तरराष्ट्रिय महामारी भएको हुनाले कुनै पनि चलिरहेको व्यवसाय जसले पहिला नै पोर्चुगलको ‘सोसियल फिनान्स’ मा योगदान दिईसकेका छन् उनिहरुले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
यसको प्रक्रिया भनेको कम्पनीले पोर्चुगलको सामाजिक सुरक्षा निकाय ‘सोसियल’ मा आवेदन गर्छ । कम्पनीले कर्मचारीलाई तिर्ने र त्यसको भरपाई ‘सोसियल’ ले कम्पनीलाई गर्ने र ‘ले अफ’ तिरेको पैसा बराबरको ‘सोसियल कन्टिव्युसन’ गर्ने जिम्मा पनि कम्पनी कै हुन्छ । ‘ले अफ’ भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कम्पनीले अन्य कारण बाहेक बिचैमा कामको ‘कन्ट्र्याक्ट’ काट्न पाईदैन । जुन नियममा पनि छैन् । यद्यपी कर्मचारीको कारण देखाएर वा कर्मचारीलाई स्वतः निस्केको भन्ने कागज बनाएर दिने गरेको पनि धेरै उदाहरण छ । जुन मैले पनि धेरै देखेको छु । यो अवस्थामा ‘कन्ट्र्याक्ट’ अवधि सकिएको छ भने ‘रिनियु’ गर्ने नगर्न अधिकार कम्पनीकै हुन्छ । यता, राम्रो कम्पनीहरुले कार्ड नभएकालाई पनि यस्तो सुविधा दिदैं आएका छन् ।
अब कुरा गरौं ‘फून्दो’ को
‘ले अफ’ र ‘फून्दो’ लाई म सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा यदि तपाईको ‘कन्ट्र्याक्ट’ काटिएको छैन र काम मात्र रोकिएको हो भने तपाईंले पाउने ‘ले अफ’ हो । जसको सबै प्रकृया तपाईं हामीले गर्नु पर्दैन । त्यो सबै कम्पनी आफैंले गर्छ । अर्को कुरा यदि तपाईको ‘कन्ट्र्याक्ट’ काटिएको छ र कामबाट नै एउटा पत्र तपाईंलाई दिएको छ भने तपाईंले ‘फून्दो’ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ ।
‘ले अफ’ त सबै काम गर्ने ठाउँमा निहित हुन्छ । कम्पनीले आफ्नो कामदारलाई नियमअनुसार उपलब्ध गराउँछ । केही कम्पनीले शत प्रतिशत नै दिएका छन् भने केहीले ७० प्रतिशत मात्रै । ‘सोसियल’ ले कम्पनी लाई ७० प्रतिशतको दरले भरपाई गर्छ ।
यस्तै, फून्दो त पहिलदेखि नै धेरैले उपभोग गर्दै आउनु भएको हो । यसमा प्रायजसो जानकार पनि हुनुहुन्छ । अहिले मात्र आवेदन गर्ने तरिकामा केही फरक बनाइएको हो । फून्दोको लागि अहिले तपाई कार्यरत कम्पनीले काम सकियो भनेर दिएको कागजका साथ ‘मोडेलो ५०४४’ फारम र ‘सेन्ट्रो इम्प्रेगो’ को फारम भरेर आफ्नो पायक पर्ने ठाउँको ‘सेन्ट्रो इम्प्रेगो’ को इमेलबाट प्रोसेस गर्नुपर्छ ।
कोरोनाका कारण अहिले यो प्रक्रियाको सबै ‘प्रोसेसिङ’ इमेलबाट गरिएको छ ।
‘फून्दो’ दिने पनि ‘सोसियल’ले नै हो । तर ‘सेन्ट्रो इम्प्रेगो’ मार्फत ‘सोसियल’ सँग जोडिन्छ । यसरी इमेल गरेपछि त्यसको प्रतिउत्तर इमेलमा नै आउनेछ । यसैको आधारमा प्रक्रिया अघि बढेछ । सबै प्रक्रिया रजिष्टर भएपछि तपाईको ‘सोसियल सेगुरान्सा सिस्टम’ मा देखिन्छ ।
३.कार्ड नभएकोले ‘फून्दो’ पाउँछ कि पाउदैन ?
कार्ड नभएकोहरुले ‘फून्दो’ आवेदन गर्न पाउँदैन । तर अहिले ‘सेफ सर्टिफिकेट’ भएकालाई अन्य नागरिकसरह सुविधा दिने सरकारी निर्णयलाई स्वीकार गर्दा कार्ड नभएकाहरु र पहिला ‘सोसियल’ मा योग्दान गरेकाले पनि ‘मोडेलो ५०४४’ फारम भरी काम छुटेको कम्पनीको छाप लगाएर इमेल गर्न भनेको छ ।
[email protected] लगायत अन्य सेन्ट्रो इमप्रेगो को इमेल वा वेबसाइट iefponline हेर्न सक्नु हुनेछ ।
पछिल्लाे - बिदेशी भुमीमा कृष्णलाई परेको वज्रपात: नेपालमा आमाबाबु गुमाएर पनि लकडाउनले गर्दा अन्तिम मुख हेर्न पाएनन्
अघिल्लाे - लन्डनबाट संचालित हिमालय मेल डटकमको प्रधान सम्पादकमा पत्रकार बिपिन निरौला नियुक्त